Horizontal feeder imhando yepneumatic conveyor ine chimiro chemberi, ine hunyanzvi hwekuburitsa nekushandisa fluidization uye kumanikidza feed tekinoroji uye yakasarudzika fluidized mubhedha.
SjGJD060-3GStepped Type Rakaomarara Mortar batching chirimwa
SjGJD060-3G yakatsika-mhando yakaoma dhaka batching michina inotora yakatsika-mhando chimiro, iyo ine hunhu hwekuita kukuru, kugadzikana uye kuvimbika, uye inogona kushandiswa kusanganisa yakajairika yakaoma dhaka uye yakakosha yakaoma dhaka.
Kugamuchira iyo inosanganisa tekinoroji yedhiramu kupatsanura uye kunonoka kuongorora uye kupatsanura, uye kuenderera kwejecha kupatsanurwa; nekungori chimiro, zvakanaka kupatsanura mhedzisiro, yakaderera kushandisa mutengo uye bhenefiti yakanaka yekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
Concrete Rori Musanganiswa 4 × 2
Shantui Janeoo anga achigadzira uye achiburitsa kongiri yemarori musanganiswa kubva kuma1980. Iyo yakaunganidza hupfumi ruzivo mukugadzira, kugadzira uye mushure mekutengesa sevhisi.
SjGTD060-3G Shongwe Rudzi Rakaomeswa Maturi Batching Plant
Sjgtd060-3g yakaoma dhaka batching michina inotora shongwe dhizaini, ine hombe kugadzirwa, simba kuchengetedza uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza, kugadzikana uye kuvimbika maitiro, anonyanya kushandiswa kusanganisa zvakajairika yakaoma dhaka.
Concrete Rori Musanganiswa 6 × 4